Baidoa Media Center » Taariikh nololeedka iyo tan waxbarasho ee gudoomiye Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Taariikh nololeedka iyo tan waxbarasho ee gudoomiye Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
August 28, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Waxaan idiinsoo gudbinaynaa taariikhda gudoomiyaha cusub ee dowlada Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Proff Maxamed Shiikh Cismaan Aden(Jawaari) waxa uu ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose bishii December 1945.
• Waxa uu ku hadlaa, qoraa akhriyaa afafka: Somaliga, Carabiga, Ingiriisiga, Taliyaaniga iyo Norwejiga.
Waxa uu xilal iyo shaqooyin kala duwan ka qabtay Dalka Norway, oo ay ka mid yihiin